Ahoana ny fahombiazan'ny Amazon amin'ny fikarohana karoka tsara indrindra amin'ny lalan'ny mpivarotra?
Mampalahelo fa tsy misy toro-làlana azo antoka na fepetra arahin-dingana izay ahafahana manome antoka ny lisitry ny vokatrao dia hahita tsara amin'ny alàlan'ny fikarohana Amazon ho an'ny tolotra mivarotra ambony. Miaraka amin'ny mpividy mavitrika an-tapitrisany maro, ny tolotra tsy hita isa, ary ny algorithm amin'ny algorithm amin'ny algorithm amin'ny algorithm dia tena toerana tsara indrindra hivarotana. Ary indreto rehefa tonga ao an-tsehatra ny sariohatry ny lisitry ny fanatsarana. Midika izany fa amin'ny lisitra tsara amin'ny teny fanalahidy avo lenta no azonao atao dia mora mora ny mihanika any ambony any Amazon hitady soso-kevitry ny mpivarotra - yacht boat rentals miami. Saingy ahoana no ahafahana mahita ny teny fanalahidy tsara indrindra amin'ireo volavolan-karoka fikarohana lehibe nefa mbola manjavona fifaninanana ihany? Eto ambany eto dia hampiseho anao fohifohy fohy mba hanatsarana ny zava-misy, farafaharatsiny izay mifandraika amin'ny fikarohana momba ny teny malaza amin'ny Amazon.
Find Gathering Keywords
Raha tsy fantatrao tsara hoe inona ny teny fototra fototra tianao hampiasaina amin'ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon, dia ity ny teboka fanombohana anao. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manantona ireo teny fanalahidy voa. Midika izany fa raha efa manana vokatra fananana ianao dia fotoana izao hamantarana ireo fikarohana fototra fototra, mifanaraka amin'ny fahazoana sary goavana amin'ny fisidinana lava fohy ampiasain'ny mpivarotra mivantana. Manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny Keyword Planer an'i Google ho toy ny solosaina tianao ho tonga lafatra mba hahatakatra avy hatrany ireo fitsipika ao amin'ny lalao izay tianao handresena amin'ny Amazon amina tolotra mivarotra ambony.
Teny Fikirakira Ny Teny Fikirakira
Ny dingana manaraka dia ny fanangonana hevitra manan-danja avy amin'ny loharano roa lehibe - ireo tadiavina karoka amin'ny finday, ary koa ireo teny fanalahidy avo lenta sy fampifanarahana lava ampiasain'ny ny mpifaninana aminao. Eto dia rehefa mampiasa teny fikarohana momba ny fikarohana sy fanaraha-maso an'i Amazonia i Amazon! Soa ihany, misy safidy maro (izany hoe, fitaovana manokana, sehatra an-tserasera, na fanitarana tranokala) hita ao amin'ny tranonkala. Raha ny amiko, dia te-hikaroka hikaroka fifaninanana aho, miaraka amin'ny fanadihadiana lalina momba ireo tian'ny mpividy indrindra amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo fitaovana ampiasaina hanombanana ny fikarohana amazonaly ny votoatin-kojakoja lehibe ho an'ny mpivarotra: KeywordInspector, Scope, JungleScout, na AMZ feno tavy Tracker toolkit.
Analyse the Metric Key - And You're Done
Tsy mahagaga raha ianao no hanao ny fomba fijery an'arivony mety hahazo fandresena. Fa ahoana ny fomba hilazana soso-kevitra tena mendrika avy amin'ny sasany tena tsy dia misy antony loatra? Ireto misy lohahevitra manan-danja azonao hamadihana ny lisitr'ireo hevi-teny fototra amin'ny fomba fohy:
Fikarohana manerana izao tontolo izao. Midika izany fa ankoatra ny tsenan'ny Amazona, ny volavolam-pikarohana dia manome antsika fahatakarana malalaka ny laza malaza amin'ny teny Google eo amin'ireo mpividy mivantana.
Clicks - dia hanampy anao hahatakatra ny mety ho endriky ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny teny tokana tokana. Na ny mifamadika amin'izany, ny fahafantaranao ny tsindrim-peo na ny fifamoivoizan'ny akaiky indrindra amin'ny orinasa na ny mpifanolo-bodirindrina aminao, dia azonao atao ny mamaky mora foana ireo teny manan-danja sasantsasany izay maneho ny vokatra tsara indrindra amin'ny Amazon.
Fitadiavana teny filamatra - Diniho ny fahasamihafan'ny lava sy ny famaritana ny teny fototra na fehezanteny lava talohan'ny famoahana ny lisitry ny fanatsarana ny vokatra ho an'ny tsirairay. Midika izany fa ny zavatra tena sarotra eto dia ny mahita ny fifandanjana mahasalama mahasalama eo amin'ny lanjany ara-barotra sy ny fahasarotan'ny famaritana. Ary tsarovy, mikasa ny hitady ireo teny fanalahidy izay mety ho ampiasain'ny olona tena izy, fa tsy fitadiavana fitaovana.